egweri akụrụngwa na akụkụ ahụ mapụtara, ụlọ ọrụ na-ebunye ya China egweri akụrụngwa na akụkụ ahụ mapụtara Nsukka
Igwe na-agbapụta agbapụ bụ ụdị igwe eji egbu egbu nke mepụtara mba ụwa na etiti 1980s. Ọhụrụ extrusion egweri technology tumadi ekewet ya nwere mmetụta dị ukwuu na ike ịzọpụta, na e n'ọtụtụ ebe kpọrọ site mba ciment ụlọ ọrụ dị ka a mmepe-egweri. Nkà na ụzụ ọhụrụ nke nkà.
Akụrụngwa vetikal na-egwe ọka bụ igwe eji egwu igwe eji agba anọ na-egweri rollers.
JGM2-113 coal na nkume igwe nri bụ igwe na-agba ọsọ ọsọ. Akụkụ ya na-egweri ya bụ mgbaaka na-egweri ya na atọ na-atụgharị onwe ya na-agbagharị na-agagharị na mgbanaka igwe.
Cement vetikal na-eji egweri simenti akụrụngwa. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ: akụrụngwa na-abanye nfuli na-agbapụta site na valvụ mkpọchi ikuku atọ, ọkpọkọ na-agbapụta na-abanyekwa n'ime igwe ahụ site n'akụkụ nke separator.
JLMS ala na nkume igwe nri na-eji maka tupu-egweri nke ciment clinker.
Slag vetikal nkume igwe na-adịghị mma mgbali ikuku Ibulite ụdị egweri akụrụngwa, nke ga-akpọ nkụ na slag na Mike slag.